DAAWO: Xaflad lagu caleemo saaray Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaalida Norway oo ka dhacday Oslo. | gobolada.com
Jul 16, 2019 - jawaab
Xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan bulshada Soomaalida Norway taasoo ujeedkeedu ahaa caleemo saarka Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Cadnaan Cabdulle Maxamed ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xaafadda Grønland ee magaalada Oslo.
Caleemo saarkaasi oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Culumaa’udiin, Haween iyo Dhalinyaro waxaa ugu horayn ka hadlay Xildhibaan Baashe Muuse oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Oslo isla markaana ah mudane door-weyn ku leh arrimaha Soomaalida wadanka Norway ayaa sheegay inay sharaf iyo maamuus u tahay in munaasabadan quruxda badan lagu marti qaado isla markaana uu goobjoog ka ahaado.
HALKAN HOOSE KA DAAWO SAWIRADDA XAFLADDA CALEEMA-SAARKA.
Salaad Xuseen Maxamuud (Salaad-Daacad)